ग्रीनलाइफ हाइड्रोपावरको आइपिओ आजबाट खुल्यो? कस्तो छ कम्पनी जान्नुस – Eps Sathi
ग्रीनलाइफ हाइड्रोपावरको आइपिओ आजबाट खुल्यो? कस्तो छ कम्पनी जान्नुस
February 5, 2021 2126
ग्रीनलाईफ हाइड्रोपावर लिमिटेडले साधारण सेयर (आइपिओ) माघ २३ गते अर्थात आजबाट खुलेको छ। आइपिओ निष्काशन गर्न सानिमा क्यापिटल लिमिटेड र ग्रीनलाईफ हाइड्रोपावर बीच शेयर रजिष्ट्रार सम्बन्धि सम्झौता यसअघि नै सम्पन्न भईसकेको थियो। उक्त सम्झौता पत्रमा ग्रीन लाईफ हाइड्रोपावर लिमिटेडको तर्फबाट याङचेन डोमा लामा र सानिमा क्यापिटल लिमिटेडको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भिष्म राज चालिसेले हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो। कम्पनीको आइपिओमा २७ गतेसम्म आवेदन गर्न सकिनेछ। पर्याप्त आवेदन नपरेको खण्डमा आइपिओ भर्ने समय फागुन ७ सम्म हुनेछ।
यस कम्पनीले केहि समय पहिला स्थानिय आयोजना प्रभावितहरुका लागि सेयर बेचेको थियो। स्थानीय बासिन्दाको लागि खोलिएको सबै सेयर बिकेको थिएन। ग्रीनलाईफ हाइड्रोपावर लिमिटेडले १०० अंकित दरको १८ लाख कित्ता शेयर तथा स्थानीय बासिन्दाको लागि बिक्री खुल्ला गरिएको शेयरमध्ये बिक्री नभएका १६ लाख ९६ हजार ४०० कित्ता शेयर गरी जम्मा ३४ लाख ९६ हजार ४०० साधारण शेयर सर्वसाधारणमा निष्काशन गर्नको लागी नेपाल धितोपत्रबोर्डबाट माघ ४ गते स्वीकृती प्राप्त गरिसकेको थियो। ३४ लाख ९६ हजार ४०० कित्तामा सामुहिक लगानी कोष, कर्मचारी पनि समावेश छन्। ग्रीनलाईफले दोलखाको मार्बु गाविसमा ४० मेगावाटको खानिखोला जलविद्युत आयोजना निर्माण गरिरहेको छ।
कम्पनीको आइपिओमा आवेदनकर्ताले न्युनतम १० कित्ता तथा अधिकतम १ लाख कित्ताका लागि आवेदन गर्न सक्नेछन्। अहिले कम्पनीको चुक्ता पूँजी १ अर्ब ४४ करोड रहेको छ। स्थानिय प्रभावित जनता र सर्बसाधारणलाई आइपिओ बिक्री गरिसकेपछि कम्पनीको चुक्ता पूँजी १ अर्ब ८० करोड पुग्नेछ।
Posted in सेयर बजार
Prevकोरियामा पहिलोपटक नेपाली पुस्तकालय खोलिने
Nextकुन बैंकबाट सेयर भर्दा कति शुल्क लाग्छ?
कोरोना बढेसँगै कोरियाले यस्ता नियमहरु लागू गर्दै, कोरियामा भएका नेपालीहरुले समेत बुझ्नैपर्ने
छेकेन को’रोनाले, कोरियाको निर्यात ८१ प्रतिशतले बढ्यो
कोरियालाई विश्वकै पाँचौ शक्तिशाली देश बनाउने सत्तासिन पार्टीका राष्ट्रपति उम्मेदवारको घोषणा
कोरियामा गुडिरहेको कार हिँउमा चिप्लिएर बाटोमा रहेका ३ विदेशी श्रमिकलाई किच्यो, गयो सबैको ज्यान
१०० बर्षअघि कस्तो थियो कोरिया? हेरौं यि १२ वटा फोटोमा (10025)
कोरियामा खिसुक्सामा ढोका नलगाई सुत्दा कम्पनीको खोङजाङनिम छिरेर…. (10012)
कोरियामा एक स्कुल पढ्ने के’टीलाई रे’प गरेको आरोपमा नेपाली र बंगाली सहित ६९ जना कलेज बिध्यर्थी प’क्राउ (6761)
कोरियाले कामदार लाने प्रकृया सुरु, सिसिभिआइ फाराम खुल्यो (सूचनासहित) (5631)
हाइपर फण्ड डुबेको हल्ला चल्दै, खासमा भएको के हो? जानौं (5334)
हाइपर फण्ड र क्रिप्टोकरेन्सीमा लगानी गर्ने नेपालीलाई जहाँ भए पनि पक्राउ गरिने (4537)
खुल्यो कोरियन भाषा परीक्षा, हेरौं कहिलेबाट फाराम भर्ने? (4466)
हाइपर फण्ड ठगि योजना ‘पोन्जी’ को नयाँ स्वरुप (4022)
इपिएस मार्फत कोरिया आएको १ महिना नबित्तै एक नेपाली युवालाई कोरियाले गर्यो देश निकाला (3534)
कोरियामा रहेका नेपालीहरुका लागि खुशीको खबर, कोरियाले जारी गर्यो भिजासम्बन्धी यस्तो नियम (3502)